Ady amin’ny kolikoly sy andramena : notsikerain’ny amerikanina ny fitondrana | NewsMada
Ady amin’ny kolikoly sy andramena : notsikerain’ny amerikanina ny fitondrana
« Tsy misy ny fisamborana ireo mpandraharaha tafiditra amin’ny fanondranana an-tsokosoko ny andramena. Na eo aza ny ezaky ny Bianco sy ny fitondrana, tsy mety mivoaka ny anaran’ireo trondro vaventy », hoy ny ambasadaoro amerikanina, Robert Yamate, omaly teny Tanjombato. Nohitsiny fa tafaporitsaka hatrany ivelany aza ireo mpandraharaha tafiditra amin’izany trafika izany. « Mila tohizina ny ezaka natao ary tokony hanana ny fahaleovantenany ny Bianco », hoy ihany izy.
Etsy andaniny, niaiky ny Bianco fa misy tokoa ny olana. « Efa eo ny lalàna sy ny rafitra, saingy tsy hita ny fampiharana izany. Takina anefa ireo mba hirosoantsika haingana hiadiana amin’ny kolikoly. Sakana ny tsy fahatapahan-kevitra hampihatra ny lalàna ka mila ezaka sy finiavana izany », hoy ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis. Notanterahina tamin’io fotoana io ny fanehoan’ny Transparancy International ny tatitry ny fanadihadiana nataony momba ny kolikoly ho an’ny taona 2015.
Tsy nihetsika ny filaharan’i Madagasikara
Tsy nihetsika ny filaharantsika eo amin’ny ady amin’ny kolikoly raha ny taha fahatsapana ny kolikoly. 28/100 ny salanisa azo tao anatin’ny roa taona. Laharana faha-123 amin’ireo firenena 168 nanaovana fanadihadiana isika. « Zava-dehibe aloha rehefa tsy nidina ny laharantsika satria teo am-pamolavolana ny paikadim-pirenena hiadiana amin’ny kolikoly isika ny taona 2014-2015. Mbola mametraka ny rafitra rehetra isika ka tsy mahagaga izany. Manomboka eto anefa ny ezaka hatao ary ho tratra ny tanjona raha tena hampiharina ny stratejia », hoy ihany ny Bianco.
Na izany aza, nambarany fa ilaina ny fampitaovana sy ny ara-bola.